By Victoria Akpan TMLT October 22, 2021 Business, si ebi ndụ 0 Comments
- Albums Rap kacha mma -
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ hip hop n'anya, mgbe ahụ ị nwere ike nwee mmasị ịlaghachi n'oge wee marakwa ọba egwu kacha mma oge niile.
N'agbanyeghị na azịza ya nwere ike gbagwojuru anya na nke gbasara onwe ya, ndị a bụ ọba rap kacha mma ruo ugbu a, nke emetụtala odida obodo rap ma kwesị ige ntị.
Mkpọmkpọ Ebe Oge Ochie Gburugburu Ụwa
Ebe aga njem gburugburu ụwa n'ọnwa Disemba
Ụlọ oriri na ọ Romanticụ Romanticụ ndị Istanbul nke dị gị nso
Ezumike osimiri na ebe ntụrụndụ niile
Albums kacha mma nke oge niile
Nke a bụ ọba rap kacha mma oge niile, site na 1900s ruo taa:
1. Ọ na -ewe mba ruru nde mmadụ ijide anyị azụ site n'aka onye iro ọha (1988)
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Ọ na-ewe mba nde mmadụ iji jide anyị azụ, Ọhaneze nke abụọ album, dị ka mmetụta hip-hop dị ka The Velvet Underground & Nico na-egwu egwu egwu. O juputara n'iwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nkatọ ọha mmadụ na-agba agba.
Eziokwu ahụ bụ na edere ọba ahụ n'ime izu isii, ịlele nlele maka ụda mbụ na -adọrọ mmasị, bụ mmezu n'onwe ya, mana ọ bụ mere ka ihe niile dị ịtụnanya mgbe ị na -atụle ike egwu nke onye ndu rapper otu, Chuck D. gosipụtara na egwu ya.
Ọ na -ewe mba, nke na -etinye echiche pịmkị na isiokwu ike ọchịchị ojii na ikpe na -ezighị ezi nke ọha, ka na -agbakwa ume ige ntị taa dịka ọ dị mgbe ewepụtara ya na mbụ, na -akwado ọnọdụ onye iro ọha dị ka ndị ọsụ ụzọ ụlọ ọrụ.
2. Gangster Chronicle nke London Posse (1990)
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Akụkọ Gangster bụ ọba ama ama ama nke na-akara akara oge mbụ ndị na-eme ihe nkiri na-abụghị ndị Amerịka nyere aka n'ụdị a site na iji ụda nke obodo ha.
Ọ bụ album mbụ na naanị otu UK hip-hop London Posse wepụtara.
N'ihi nke a, Gangster Chronicle debere ọkọlọtọ maka hip-hop nke Britain, na-ejikọta akụkụ nke ụlọ ịgba egwu na ndị nwoke nke gbanyerela mgbọrọgwụ na mmepụta rap nke obodo anyị.
Egwu ọ bụla na otu album a, site na mmeri reggae nke nnukwu ihe ịga nke ọma nke otu ahụ, "Ego Mad," ruo na nrụpụta dị njọ na "Gangster Chronicle," na-egosi etu hip-hop UK si si na ọba egwu a wepụta, na-ekepụta ụda Britain pụrụ iche nke meghere ụzọ maka ndị egwu taa. .
3. Ozizi dị ala site n'ebo akpọrọ Quest (1991)
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Otu ọba nke abụọ akpọrọ Quest, Echiche Dị ala, ebuli elu hip-hop gaa n'ebe dị elu, na-eme ka ụda olu ya dị elu na jazz samples nke Q-Tip deziri, ma mee ka Dr. Dre dekọọ album mbụ ya, The Chronic.
Ihe si na ya pụta bụ ndekọ na-adịghị agafe agafe nke pụtara ọ bụghị naanị maka nchepụta ya kamakwa maka nkatọ ọhaneze, ọkachasị ọgwụgwọ misogyny na egwu dịka "Mmeko Ọjọọ Ọjọọ," pre-Me Too (ọ bụ ezie na ọ dị njọ) na-asọpụrụ nkwenye.
Theory-End Theory na-ewere ọnọdụ amamịghe, nwee ahụ iru ala ọbụna karịa abụ a ma ama nke otu, "Enwere m ike ịkụ ya?" (nke sitere na njem mmuta nke ndị mmadụ na ụzọ nke Rhythm), yana ihe mgbakwunye agbakwunyere nke na-egosipụta uto otu ahụ dị ka ndị na-ese ihe.
4. The Chronic nke Dr. Dre (1992)
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Ọpụrụiche Dr. Dre na-eme ka ị bounce, na na album mbụ ya kemgbe ọ hapụrụ NWA, ọ naghị emechu ya ihu.
Dre's G-funk ụda, nke atụmatụ swirling synths na funky bass, a na-amata ya ozugbo ma bụrụkwa ihe na-adọrọ adọrọ taa dịka ọ dị na 1990s, na-esetịpụ ụkpụrụ ọhụrụ maka mmepụta hip-hop nke nwere ike ịbụ na ọ kabeghị.
Na egwu dị ka "Nuthin'Ma AG Thang" na "Lil'Ghetto Boy" nke na-egosipụta Snoop Dogg nke amabeghị mgbe ahụ, ụzọ silky duo ahụ maka rap kpọsara n'oge ọhụrụ, dị nro maka ụdị ahụ, nwere ụda azụ azụ, nke nwere ụda na-apụ apụ na ụda na-emeri. oge ahụ.
Gee album a ma ị ga-aghọta ihe kpatara Dr. Dre ji bụrụ otu n'ime ndị ama ama nke ụlọ ọrụ egwu.
5. Banye Wu-Tang (Ụlọ 36) Site na Wu-Tang Clan (1993)
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Mgbe RZA na Ghostface Killah kpebiri ịmalite Wu-Tang Clan, ha nwere ebumnobi doro anya ma ghọta na ọ dị ha mkpa ka ha jiri ndị rappers kacha mma na egwuregwu gbaa onwe ha gburugburu iji mee ka ọ mee.
Ndị otu ahụ jiri usoro ọchịchị onye kwuo uche ya mepụta album mbụ ha, Tinye Wu-Tang (ụlọ iri atọ na isii), na-emegide ndị na-agba egwu megide ibe ha n'agha iji kpebie onye sonyere na egwu ọ bụla, na-ebute kpakpando dịka Ol 'Dirty Bastard na Raekwon n'ihu.
Nsonaazụ ya bụ ụda n'okpuru ala siri ike, ya na ihe nkiri RZA samplings martial arts dị ka Shaolin na Wu-Tang ka ha na-ebufe igwe igwe ahụ n'aka ndị ọrụ rapper ya, na-ebute njikọ nke nyere aka bute mkpagharị East Coast rap na 1990s.
6. Doggystyle Site Snoop Doggy Dogg (1993)
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Snoop Dogg's mpụta mbụ album, Doggystyle, ewepụtara otu afọ mgbe ọ na mbụ dọtara ọkwa nke ndị nkatọ na Dr. Dre's The Chronic, na ọ gara ozugbo No. 1 wee bụrụ ndị kasị ere hip-hop album mgbe.
Enwere ike ịhụ mbipụta paw Dre n'ime ọba ahụ niile, mana ọ bụ amamihe na echiche Snoop na-eme ka egwu a pụta ìhè.
mgbe Egwu Snoop Dogg na Doggystyle nwere ọchịchọ ịkpagharị n'ebe mmekọahụ na ime ihe ike, nnyefe ya pụrụ iche jikọtara ya na mmepụta Dre zuru ezu iji mee ka ị gbanwee anya ma ọ bụrụ na ị na-ewere ya dị ka ngwaahịa nke oge ya. Enwere onye ọ bụla maka gin na tonic?
7. Illmatic nke Nas (1994)
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Illmatic, album mpụta mbụ nke Nas, bụ ezigbo mmeri, nwere ihe atụ jazz na egwu ụbụrụ nke mere ka nwata ahụ dị afọ 20 wee banye n'ọkwa ụkwụ ọ na-ahapụbeghị kemgbe.
Nas na-ese ọhụụ nke ibi ndụ n'ime ime obodo nke na-efegharị site na mkpasu iwe na olileanya, na-enye akụkọ ọhụrụ nke ihe ọ dị ka ịmalite na mpaghara ịda ogbenye mgbe ọ na-eburu nrọ nke mgbapụ, na ọrụ nke DJ Premier, Large Prọfesọ, Pete Rock, Q-Tip, na LES na mmepụta.
Illmatic dị ịtụnanya nke ukwuu na ndị ọkà mmụta enyochala ya, ọ ga-agbadakwa n'akụkọ ihe mere eme dị ka ọ bụghị naanị otu n'ime album hip-hop kacha mma n'oge niile, kamakwa otu n'ime egwu kachasị mma edekọtara n'ozuzu ya.
Nas nwere ike ịsị, "Ndụ bụ anụrị ma ị nwụọ," mana Illmatic ga-abụ akụkụ nke ihe nketa ya mgbe niile.
8. Njikere ịnwụ Site The Notorious BIG (1994)
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Onye ọ bụla chọrọ ịkatọ egwu rap maka ito igbu mmadụ na omume mpụ nwere ike ige ntị Onye ama ama BIG dị njikere ịnwụ.
Ee, abụ dị ka "Juicy" na "Big Poppa" na-elekwasị anya n'akụkụ dị mma nke ndụ ya, dị ka akụkọ ya na akụ na ụba na ịtọgbọ ya, n'otu n'otu.
Ma n'ebe ọzọ na Njikere Ịnwụ, Biggie na-ekwu hoo haa banyere ọdịda, na abụ dị ka "Mgba mgba kwa ụbọchị" na "Echiche igbu onwe" na-ekwu okwu obi nkoropụ na mkparị nke na-abịa na ndụ mpụ.
Na Ready To Die, enwere ezi uche n'okpuru ntụkwasị obi na ụda olu ya, yana mgbe ejikọtara ya na ikike ịkọ akụkọ ya na mmepụta ọmarịcha album ahụ, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ọtụtụ ndị ji were ya dị ka onye rapper kacha mma n'oge niile.
Abụọ nke anọ na nke ikpeazụ nke 2Pac, nke ewepụtara n'oge ndụ ya, bụ ike hip-hop tour de force, nke mbụ ụdị ya ka ebipụta maka oriri zuru ebe niile na ịlaghachi azụ na egwu mgbe ọ nọchara ọnwa iri na otu n'ụlọ mkpọrọ maka mwakpo mmekọahụ.
Enweghị akara ọ bụla n'uche ha ziri ezi ga -agbapụta ya maka mpụ ya na gburugburu ebe obibi taa, mana Ọnwụ Row Records mere ya na 1995, na -agbaghara ihe karịrị nde $ 1.4 na ọnọdụ ọ ga -ekepụtara ha ọba atọ ozugbo ewepụtara ha.
Egburu onye rapper ahụ n'ịgba egbe na-erughị otu afọ, mana ọ bụghị tupu ewepụta All Eyez On Me, album ewepụtara ngwa ngwa nke were naanị izu abụọ iji wuchaa.
Ọ bụ ezie na enwere mmetụta nke ịdị ngwa n'ime ọba ahụ niile, ọrụ 2Pac adịghị mma, na-ahapụ isiokwu ndị na-atụgharị uche onwe ha nyochara na Me Against The World na-akwado ememme na-adịghị mma nke Thug Life.
All Eyez On Me nwere ike ọ gaghị abụ ọba 2Pac kacha eche echiche, mana ọ na-egosipụta ụfọdụ ndị na-emepụta ihe nkiri Death Row Records, gụnyere, ị chepụtara ya, Dr. Dre.
Mana ọ bụ ya bụ nke iberibe niile gbakọtara n'otu n'otu zuru oke, o kwesịkwara ka a mata ya dị ka otu n'ime ndị ukwu, n'ihi nnukwu ohere ya na ntụgharị dị mkpirikpi.
10. Akara site n'aka ndị gbara ọsọ ndụ (1996)
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. "Ọ dị ka Tommy hip-hop, dị ka ihe Onye mere egwu rock," Lauryn Hill kwuru maka ọba nke abụọ Fugees tupu ewepụta ya.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu ụdị okwu ahụ, ị ​​​​ka mma ịga ije, na Score adịghị emechu ihu mgbe e wepụtara ya.
Akara ahụ dị nso na nghọta, na -ejikọta ihe atụ ọkaibe, ngwa dị ndụ, na ọgụgụ isi vignettes nke ndụ ghetto. N'oge ahụ, ọ na-amasị ọtụtụ ndị na-atụghị egwu egwu hip-hop.
Na ọba egwu a, onye ọ bụla so n'òtù ahụ nwere ohere ịgbanwuo, mana Score bụ ihe a ma ama maka iwebata Hill n'ọtụtụ ndị na-ege ntị, ya na ụda olu ya na-akwado ụda miri emi nke otu ahụ na alụlụ dị ka "Ma ịdị njikere ma bụ na ịdịghị" na "Jiri Abụ Ya Na-egbu M Ji nwayọọ."
Naanị otu afọ ka ahapụchara The Score, ndị otu ahụ kewara wee malite ịrụ ọrụ na ọrụ solo, mana ọ bụ oge zuru oke maka Score iji dochie ebe Fugees na ama ama hip-hall hop, na-agbanwe ọdịdị ala.
11. Aquemini nke OutKast (1998)
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Aquemini nke OutKast kwalitere nka ha site na iji ngwa ndụ na mmegharị ihe mgbe ihe ịga nke ọma nke album abụọ mbụ ha, na-ewebata nkwanye ùgwù ọhụrụ maka South hip-hop na ụdị.
Egwú egwu dị na Aquemini debere André 3000 na Big Boi dị ka ndị na -ese ihe nwere ntị maka imepụta ihe, na -akpọ ngwakọta egwu pụrụ iche na studio wee mepụta ngwa egwu album ahụ site na nnọkọ mkpọtụ.
Di na nwunye ahụ nwetara nke a site na ijikọta ụdị ha dị iche iche (aha album ahụ na -ezo aka na akara kpakpando nke Aquarius na Gemini) iji mepụta ụda pụrụ iche n'ezie.
Ọ bụ ndekọ mmeri na ọfulụ, yana mkpụrụ obi na ụda ọchị a kpara na ngwakọta na uri pụrụ iche iji buo. Kedu ihe nwere ike ịka mma karịa ịdị jụụ? "Nnukwu ice!" ụfọdụ na -ekwu, mana anyị na -ekwu OutKast - na naanị OutKast.
12. Miseducation nke ugwu Lauryn Site na Lauryn Hill (1998)
Site na Fugees' The Score, Lauryn Hill nwetara obi ndị mmadụ, mana ọba egwu mpụta mbụ ya, Mmụta nke Lauryn Hill.
Ihe omume aghụghọ nke Lauryn Hill jupụtara na mkpụrụ obi yana enweghị ike iche echiche, yana ngosipụta oge ụfọdụ site na mmasị Mary J Blige na D'Angelo, ka Hill na-adaba n'etiti ịgba egwu na ịbụ abụ n'ụzọ dị mfe.
Edere ya na mpụta ihe okike sitere n'afọ ime ya na Rohan Marley.
Miseducation nke Lauryn Hill meriri Grammys ise, na-eme ka ọ bụrụ album hip-hop mbụ iji nweta ihe nrite nke Album Of The Year, yana nwanyị mbụ meriri iko ise n'otu ihe omume.
A ka na-anụ egwu nke Miseducation na hip-hop na neo-soul wepụtara taa, n'ihi mmetụta ha na-adịgide adịgide. "Doo Wop (Nke ahụ)," egwu bụ isi nke album ahụ, nwere ike ịnụ na oriri ọ bụla kwesịrị ịga ebe ọ bụla n'ụwa.
13. The Blueprint Site n'aka Jay-Z (2001)
Nke a bụ otu n'ime ọba kacha mma rap. Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ Michael Jordan Ikpeazụ Dance kụziiri anyị ihe ọ bụla, ọ bụ na ụzọ kachasị mma iji zaghachi ndị nkatọ bụ ịga nke ọma, nke bụ kpọmkwem ihe Jay-Z mere na album nke isii ya, The Blueprint.
Mgbe ọ na-alụ ọgụ na "Takeover," ihe fọdụrụ na album ahụ na-ekwu maka onwe ya, na-emegharị omenala hip-sample hop site n'enyemaka nke Kanye West na-eto eto na mmepụta Just Blaze.
Na "Hola' Hovito," Jay-Z ji obi ike na-emesi ndị na-ege ntị obi ike na "Ọ bụrụ na adịghị m mma karịa BIG, abụ m onye kacha nso." Ihe si na ya pụta bụ mmega ahụ nke nwere mmetụta nke mkpụrụ obi na bravado, ka ọ na-ewepụ mpi nke ya n'elu ihe nlele ndị a nụchara anụcha, na-eji obi ike na-emesi ndị na-ege ntị obi ike na "Ọ bụrụ na m adịghị mma karịa BIG, abụ m onye kacha nso."
Ọ bụ ezie na a na-agbagha ma The Blueprint bụ album Jay-best Z-o kwupụtala na mpụta mbụ ya, Ezi Obi Abụọ, bụ ọrụ ya kachasị mma-a pụghị ịgbagha mmetụta ya, na-etinyekarị usoro iwu maka mmepụta hip-hop n'afọ ndị na-abịanụ. Otu a ka ị ga-esi mechie ndị naysayers na-akpasu iwe.
14. My Beautiful Dark Twisted Fantasy Site Kanye West (2010)
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Mgbe Kanye West kwuputara na Jimmy Kimmel na 2013, "Abụ m onye nwere ọgụgụ isi na enweghị ụzọ ọzọ isi tinye ya," ọtụtụ ndị kwara emo, mana na 2010s. My mara mma ọchịchịrị kpakpando Fantasy, o ji swag nke kwekọrọ n'okwu ya jee ije.
Site n'ichepụta ihe dị egwu na egwu na -atụgharị uche n'ịdị elu oke egwu na oke echiche na oke, West pụtara n'ụzọ doro anya igosipụta oke talent ya na album a, na -enwe ọmarịcha mmepụta na egwu na -atụgharị uche n'ịdị elu na iche echiche. ọmarịcha aha na ngafe.
Site na iti mkpu na "Ike" ruo na egwu egwu na "Ihe niile," enweghị egwu abụọ na-ada otu, mana ha niile jikọtara ya site na ụda gbara ọchịchịrị nke na-apụta site na mmepụta ha.
Jay-Z, RZA, Raekwon, Rick Ross, Rihanna, na Nicki Minaj, n'ịkpọtụ ole na ole, e debara aha maka ndị ọbịa. West kere ihe ọhụụ nke oge a nke mebiri akwụkwọ iwu hip-hop wee gosipụta na ọ bụ, ka emechara, onye nwere ọgụgụ isi.
15. To pimp a nru ububa nke Kendrick Lamar (2015)
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Ndekọ ahụ, To Pimp A Butterfly, album studio nke atọ nke Kendrick Lamar, ejirila ọtụtụ ndị atụnyere Onye iro Ọhaneze Ọ na-ewe Mba, na-enye gị nghọta nke ihe ị ga-atụ anya ya site na akụkọ akụkọ ọgbara ọhụrụ a.
To Pimp A Butterfly bụ njikọ okike nke ọtụtụ iri afọ nke mmetụta egwu ojii, site na jazz ruo funk ruo mkpụrụ obi, ọ na-ejikọtakwa teepu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-edekọ ahụmịhe ojii, George Clinton na Thundercat na-agbazinye talent ha na ọba ahụ.
Ndekọ ahụ bụ ọrụ dị egwu, ya na Lamar na-egwu ihe nkiri na ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri n'ime egwu ya iji chụpụ echiche ya n'ụlọ, na-eti okwu nke ịkpa ókè agbụrụ na ikpe na-ezighị ezi maka ọgbọ Black Lives Matter.
Ọ bụghị naanị otu n'ime ọba kacha mma hip-hop ugbu a, kamakwa ọ bụ otu n'ime ọba kacha mma nke ụdị ọ bụla ewepụtara n'ime afọ iri gara aga.
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Ndepụta izizi sitere na KRS-One, D-Nice, na DJ Scott La Rock bụ ihe mara mma East Coast nke na-aga n'ihu na-akụ aka ruo taa.
Ngwakọta smart nke rap/hip-jump, rock and roll, na mmetụta reggae rụrụ ntọala ahụ n'enweghị ntụpọ ebe KRS-One na-ebuga ọtụtụ ụlọ mmanya na-akụ ihe siri ike.
Site na LP epic a, egwu dị ka "South Bronx" na "The Bridge is Over" bụ nnukwu egwu. Obi dị m ụtọ na ihe ndị fọdụrụ na egwu ndị dị na ọba a dị mma ka ndị klaasị hip-hop ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha.
17. Naanị wuru maka Cuba Linx… - Raekwon
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Mgbe Raekwon the Chef na Ghostface Killah na -enye rap mafioso, ọ na -ada ka ọ bụ eziokwu.
Ekele maka klaasị a gosipụtara, ndị mmekọ Wu-Tang abụọ ahụ mezuru usoro ahụ wee gbaa ọgbọ nke MC ndị ọzọ ume ịgbaso nzọụkwụ ha.
Mmepụta a dị egwu, skits na-atọ ụtọ, egwu ndị ahụ n'onwe ha bụ ụgwọ ụlọ 36 kacha elu.
Naanị Ewubere maka Cuban Linx… na-ewe ndị na-ege ntị na njem ọjọọ site na ndụ jupụtara na mmemme ndị otu na machismo na-enweghị atụ site na mmalite ruo ọgwụgwụ.
Ebe 10 dị ịtụnanya ịga leta na Ọktọba
Ihe ị ga -eme na DC n'izu ụka a
Ebe kacha mma n'ụwa
Echiche Nwanyị na -eme njem
18. Mma agha mmiri mmiri - GZA
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. GZA bụ “The Genius” n'echiche niile nke okwu ahụ. Na album izizi ya, Liquid Swords, o gosipụtara ikike o nwere ide akwa raps.
RZA wụsara obi ya na mkpụrụ obi ya na ọba egwu a, na -ewepụta ụfọdụ egwu kacha mma ọ megoro.
Na, ekele, nzere GZA nọrọ n'akpa n'amaghị ama maka onye ọ bụla banger ka ọ na -emebi ihe ịma aka na nsogbu nke nzụlite ghetto.
Mgbe ndetu mbụ nke "4th Chamber" malitere igwu egwu, a na -amanye onye ọ bụla na -akwado rap na mpaghara ahụ iyi uwe na -adịghị mma mgbe ọ na -akụ isi ya.
19. Ịzụlite Hel - Gbaa DMC
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Enwere ike mebie mmekọrịta na-enweghị atụ nke DMC site n'ige naanị ọba egwu egwu egwu.
Oke egwu kụrụ/mbepụ site na Jam Master Jay, Run, na DMC na -alaghachi azụ dị ka duo ngwa ngwa na oke iwe ha.
Gbaa "Peter Piper" nke DMC, "Ọ dị aghụghọ," na "Adidas m" niile nọ n'elu egwuregwu ha. Echefula maka nnukwu hip-hop/rock na mpịakọta nke Aerosmith kụrụ "Gaa n'ụzọ a."
Ịkwalite ọkụ mmụọ bụ iwu nke ịgụ akwụkwọ maka MC ọ bụla nke oge a chọrọ ịmụta otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara rapping.
20. Bụrụ ọgaranya ma ọ bụ nwụọ tryin - 50 Cent
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Onye ọ bụla maara ihe ga -eme mgbe nkeji iri na ise ahụ gachara. Mpempe akwụkwọ mpịakọta nke 50 Cent na-eji mkpọtụ ebido wee hapụ ruo ọgwụgwụ.
N'ihi ịdị mma nke LP a, nwoke a maara dị ka Curtis Jackson gbanyụrụ ọkụ na -agba ọkụ wee bata na mmụọ.
“In da Club” bụ naanị otu n'ime ọtụtụ akwụkwọ mmado nke buliri ọba a elu ka ọ bụrụ ọkwa akụkọ, na -eme ka ebe Fif dị ka nke kachasị mma ịme ya.
21. Aha ọjọọ - Mobb Deep
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. Site na mwepụta nke ọba egwu nke abụọ ha, Queensbridge's own Havoc and Prodigy (RIP, King!) buliri onwe ha elu na ọkwa dị elu nke oke hip-hop.
Aha ọjọọ ahụ bụ ngosipụta nke ụmụ okorobịa abụọ na -agagharị n'ụzọ ndụ jupụtara n'ọgba aghara.
Ma MC nyere ike ntorobịa dị egwu maka ụda ọ bụla, mgbe niile ka ị na -atụba amamihe n'okporo ụzọ karịa ụda mmanya.
Ndekọ a ga-adị na ntụgharị oge niile n'ihi egwu dịka "Shook One, Pt. II, ”“ Nlanarị nke kacha mma, ”na“ Hapụ ihe ndị ahụ. ”
22. Ụkwụ dị elu ma na -ebili - De La Soul
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Prince Paul, onye ama ama na-emepụta ihe, nyere aka na ụda egwu De La Soul mpụta mbụ.
E bipụtara ya n'oge mgbe gangsta rap na-ewe iwe niile, ma n'ihi mgbanwe nke echiche na ụda, ka o sina dị, o jisiri ike nweta nlebara anya na otuto.
Igwe ikuku dị mma nke onyonyo a na-egosipụta na mkpuchi na-egbuke egbuke, dịkwa ka egwu na-eso ya.
Posdnuos, Trugoy, na Maseo abụrụla ngwakọta na -emeri emeri, na -ama jijiji na egwu dịka "Nọmba Ime Anwansi" na "Mụ onwe m, na m" na -arụ ọrụ dị egwu nke ime ka onye ọ bụla kwenye na nke ahụ.
Site na ọba abụọ mbụ ya, onye isi okwu okwu Detroit chịkọtara egwu egwu egwu. Mgbe Eminem tọhapụrụ Ndị Marshal Mathers LP, n'agbanyeghị, ihe niile gbanwere ka mma.
Emume okwu dị nkọ na ihe nzuzu maka ọha ọha na-egosipụta n'uju ebe a. Egwu dị ka "Stan" na-egosi akụkụ nke Em nke na-adịghị atụ egwu imetụ isiokwu ndị a na-ekwukarịghị na hip-hop.
Ndị ọzọ nke Marshal Mathers LP kụrụ ihe niile dị elu nke ndị egwu tụrụ anya n'aka otu akụkọ akụkọ rap.
24. Isi ihe siri ike - Lil 'Kim
Mgbe ọ banyere n'egwuregwu hip-hop nke onye na-abụghị nwoke na-achị, "Queen B" mere ka ọ bụrụ eziokwu na ihe ruru unyi. Lil 'Kim ji Hard Core kpachara anya na ifufe, jiri nke kacha mma na -agbụ ya ọnụ mmiri.
Ọ bụ ezie na enweghị ọtụtụ ndị ọbịa na nke a, ndị ahụ na-egosi na ha na-arụ ọrụ dị egwu nke ịkwado usoro egwu egwu egwu Kim ama ama nke ukwuu.
Ụfọdụ n'ime egwu Kim kacha mma gụnyere "Big Momma Thang," "No Time," "Crush on You," and "Drugs". Na, na ohere, ha niile na -apụta na CD a.
25. Akwụ ụgwọ zuru ezu - Eric B & Rakim
Nke a bụ otu n'ime album rap kacha mma. A maara Rakim dị ka Chineke MC maka ihe kpatara ya: ya ọsọ ọsọ na flair maka imepụta mmanya nke ahụ na -ama gị ụra n'ihu emeela ya aha ahụ.
Rakim ji egwu egwu a gbanwere egwuregwu rap n'ụzọ dị egwu, nke ya na DJ Eric B.
Ogwe ndị eze Rakim na nnyefe ya na -egosipụta ebumnuche ahụ maka ịdị ukwuu, dịkwa ka mkpuchi ya, nke na -akpọpụta ọhụụ nke ime ka ọ buru ibu site na ọgba aghara enweghị ike ịkwụsị.
Ọ dị mfe ịhụ/nụ ihe kpatara akwụ ụgwọ zuru oke gbara otu ọgbọ nke ụmụaka 90s ume ka ọ gaa igwe. Cheta, “MC” pụtara “ịkwaga ndị na -ege ntị.”
Ebe ezumike kacha mma maka ndị ngagharị izu ụka di na nwunye
Ebe egwuregwu kacha mma niile na ebe a na-eme ski maka ndị di na nwunye
Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ Erimeri Mebere m
Mmiri iyi kacha mma ma dị egwu dị m nso
26. Ọ gbara ọchịchịrị na ọkụ na -ekpo ọkụ - DMX
Ọtụtụ nde ndị na -eso ụzọ gbagoro na Darkman X n'ihi àgwà yin na yang ya. N'agbanyeghi na ọ nọ na ụfọdụ ọnọdụ kacha sie ike iche n'echiche, okwukwe ya na oke agụụ a na -apụghị ịgbagha agbagha kpaliri ndị ọzọ ịnọgidesi ike n'otu ụzọ ahụ o siri mee.
ọ bụ Ọchịchịrị na ọkụ mmụọ dị ọkụ, DMX magnum opus na -akọ akụkọ ọtụtụ ọnwụnwa na mkpagbu onye nnọchi anya Ruff Ryder site na ụfọdụ egwu rap kacha sie ike edekọ.
Ndị isi okwu "Gaa na nkịta m," "kwụsị inwe anyaukwu," na "The Convo" bụ naanị ole na ole n'ime egwu na -eme album a njem dị egwu ya na Darkman n'onwe ya.
27. 'Midnight Marauders - A ebo a na-akpọ Quest'
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Mgbe A Tribe Called Quest wepụtara album ha nke atọ, ha amatala nka nka nlele jazzy na ngwa boom-bap.
Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad, na Jarobi White bụ otu n'ime ụlọ ezumike hip-hop kacha mma gburugburu.
ha Enwere ike ịnụ kemistri dị ịrịba ama n'ime ndekọ niile (ekele pụrụiche maka ogologo ahịrị Tribe nke ndị enyi kwere na ha ga -apụta na mkpuchi ya).
Egwu dị ka “Njem nturu ugo,” “Ntụrụndụ eletriki,” na “Lyrics to Go” bụ ndị ndị na -anya azụ gburugburu ụwa na -ewu ewu.
Ndị na -eme abalị n'etiti abalị bụ ikuku zuru oke nke na -atọ ụtọ nke ukwuu ma ọ bara uru inwe ya n'ọtụtụ oge.
28. 'Mecca na mkpụrụ obi nwanne - Pete Rock & CL dị nro
Nke a bụ otu n'ime ọba rap kacha mma. Nke a bụ otu n'ime ọba ndị ahụ na -eme ka olu na -amachi ebe niile n'ihi oke isi isi.
Pete Rock wuru ntọala akwara maka CL Smooth ịtọgbọ ụfọdụ egwu ya ama ama.
Nkọwa okwu nkọwa nke CL Smooth na -ejide ndụ onye NYC bi n'obodo Mecca na Soul Nwanna. A ka na-ahụta "Ha na-echetara gị (TROY)" dị ka otu n'ime egwu egwu kachasị mma oge niile.
Ndekọ ndị ọzọ na-ewebata ndị na-amachaghị maka mmepụta pụtara ìhè nke Pete Rock na ahịrị slick CL Smooth.
Kanye West Albums of All Time
1. 'Ị' (2018)
Ọ dị mfe ichefu na album studio nke asatọ nke Kanye West, Ee, elekere n'ime obere ihe na -erughị nkeji iri abụọ na anọ, yana ihe nkiri niile na ihe omimi gbara mwepụta ya.
Na, n'agbanyeghị mkpa ọ dị, mkpa ya dị ka nnukwu mgbanwe na ọrụ Kanye, yana akụkọ ọmụmụ nke ndozi Wyoming ya, album na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Nas, Pusha-T, Teyana Taylor, na Kids See Ghosts ekwuputala na ha ga-ewepụta ọba egwu asaa, nke West wepụtara, dịka akụkụ nke ọkwa ka ukwuu. Enwere okwu a ga -eme na Ye so n'ime ọkara kachasị njọ nke quartet ahụ.
Ị nwere mmetụta siri ike nke ịbụ ndị a na -eme ngwa ngwa. Mgbe ya na TMZ mebiri aha ọjọọ, West kwuru na ọ gbanwere album ahụ niile. N'ihi nke a, unu dị ka doodle nke ihe osise karịa eserese mara mma, yana ụfọdụ ụda mkpọtụ Kanye. Agbanyeghị, enwere isi ihe ole na ole.
2. 'Jizọs bụ Eze' (2019)
Ọtụtụ ndị tụrụ egwu nke ka njọ mgbe Kanye West kwuru na ya na-arụ ọrụ na album Christian akpọrọ Jesus Is King.
Nleta ọfịs Oval ya ịhụ Donald Trump yi okpu MAGA nke dị n'oge adịghị anya, na ọ na-abịa na arụmọrụ mmụọ kacha nta nke ọrụ ya, Ee.
Otu ọba nke gbadoro ụkwụ na Jesu nke enweghị Kanye West okwu mkparị site n'afọ 2019? Ọ dara ka ọdachi na -echere ime.
Mgbe a tọhapụrụ Jizọs Bụ Eze n'ikpeazụ, ọ karịrị ihe ka ọtụtụ n'ime atụmanya ndị ahụ, ma ọ ruteghị ebe dị elu nke ihe ngosi ngosi ya ndị ọzọ.
Ihe ndekọ ahụ nwere ntọala egwu siri ike. Kanye na-eme nke ọma mgbe niile n'ịgbakọ textures nke mmụọ na mmepụta hip-hop na-eche n'ihu, na album ozi-ọma dị ka Jesus Is King na-enye ya ikpo okwu zuru oke iji mee ya.
“Soro Chineke” bụ ihe egwu na-atọ ọchị nke Eziokwu Eziokwu nke 1976 “Can Can Lose by Following God” nke ahụ yiri ka Kanye vintage.
N'ime ọnọdụ egwu egwu na-emeri nke na-egosi mmetụta obi ụtọ nke ezi ahụmahụ bịara Jizọs, "Chineke Bụ" na-akwalite n'ime ụda olu dị irè, nke sitere n'obi na-esi n'aka Ye. Kanye egbubeghị ntị ya maka mmepụta egwu.
3. 'Okpokoro obi ọjọọ' (2012)
Ekwuputara na ndị otu kachasị mma karịrị ọnụ ọgụgụ akụkụ ha. Akara obi ọjọọ, n'aka nke ọzọ, na -enwe mmetụta mgbe ụfọdụ na -erughị nchikota akụkụ ya.
Ọtụtụ kwenyere na ọba mkpokọta GOOD Music, nke ewepụtara na Septemba 14, naanị ụbọchị isii tupu ngwụcha oge ọkọchị 2012, ka ọ bụrụ flop.
Eziokwu ahụ bụ na ọ nwere nnukwu egwu egwu abụọ dị egwu na "Mercy" na "Clique," ndị na-egwu egwu abụọ dị na "Cold" na "Ọhụrụ Chineke Flow," na ihe ngosi kpakpando niile nke Chief Keef's "Achọghị m" na-enyere aka. iji chekwaa ya.
4. 'Ụmụaka na -ahụ mmụọ' (2018)
Mara ọkwa na Kid Cudi na Kanye West ga -arụkọ ọrụ ọnụ na nke mbụ welitere nku anya.
Hà ga -enwetaghachi mmekọrịta ha dị ebube site na ngwụcha afọ 2000, ma ọ bụ njikọta nke Wyoming ga -egbochi nnọkọ ahụ?
Ndekọ egwu ụmụaka a na-ahụ nkeji iri abụọ na anọ dara ọkara n'etiti, mana ịdị elu ya dị ka ọnụ ọgụgụ okike Kanye na Cudi.
'' Amaliteghachiri '' nwere nkpuchi ime mmụọ sitere na Cudi, yana amaokwu Kanye mara mma ma mara onwe ya nke na, ma e jiri ya tụnyere ụda mkpọtụ nke Ye, ọ dị ka mmiri n'ọzara.
"Cudi Montage" bụ egwu ọzọ pụtara ìhè, yana West na-ebuga ahịrị na-akpali akpali banyere usoro ime ihe ike cyclical n'ebe ndị dara ogbenye (yana Cudi na -ama jijiji na -agụ egwu dị ka salve na -atọ ụtọ).
Ihe nlele Kurt Cobain na ndekọ ahụ bụkwa nhọrọ mara mma, na -enye ọnọdụ dị oke egwu na mmetụta mmụọ.
Ọ bụ ezie na West na -enye Cudi ọrụ kacha ada ụda, Kids See Ghosts bụ mmepụta ya kacha mara amara na afọ.
5. 'Donda' (2021)
Ma ị masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị, a ga -ejikọ Donda mgbe niile na mwepụta ya n'ihi na mmemme nkwado nke ya kpụrụ ihe okike nke album ahụ.
Anyị niile anụla akụkọ ahụ: Kanye tụbara oriri ntọhapụ na Atlanta, mana kama ịhapụ album ahụ ozugbo, ọ kwagara n'afọ nke Mercedes-Benz Stadium wee na-arụ ọrụ na ya.
Gị na ndị otu ya gara n'ihu na-emegharị ọba ahụ ruo izu ole na ole, na-anabata oriri na ọṅụṅụ atọ na-ege ntị tupu ha ahapụ ya, na-aṅa ntị nke ọma na nkwupụta ndị fan, na ọbụna ndị ọrụ ntuli aka nke Kanye West fan Discord obodo banyere obere tweaks na egwu ụfọdụ.
Ka ọ na -aga ụdị egwu dị iche iche nke egwu ọ bụla ma na -agbanwe usoro, ọ hapụrụ ndị na -eso ụzọ ka ha banye usoro okike.
Ebe a ga-amata ndụ Pablo maka mgbanwe ndị Kanye mere mgbe ọ tọhapụrụ ya na ọrụ mgbasa ozi, a ga-akọwa ihe nketa Donda site na ntụgharị ihu ọha nke mere tupu ahapụ ya.
Yabụ, kedu ka nnwale ahụ si pụta? N'otu ụzọ, ee. Ọ bụ ọba azụ maka Kanye n'ọtụtụ akụkụ. Ọ na -amawanye nke ọma na egwu dịka "Onyenwe m achọrọ m gị" na "gbanyụọ Grid" karịa ka o mere na ọba abụọ ya gara aga, Ye na Jesus Is King.
"Ajọ Ifufe," "Mkpụrụ Obi Dị Ọcha," na "Kwere Ihe M Na-ekwu" dị ka ndị na-alụbeghị di na nwunye nwere ike inyere Kanye aka inweta egwu redio karịa ka o nwere n'ime afọ.
Ọ na -enwetakwa ihe kacha mma n'aka ndị ọrụ ibe ya, yana amaokwu dị ịtụnanya sitere na Fivio Foreign na Jay Electronica, n'etiti ndị ọzọ. Mmepụta a magburu onwe ya ebe niile, dịka ọ dị na ọba Kanye ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịdị elu Donda dị elu n'ezie.
6. 'Ndụ nke Pablo' (2016)
Ọ bụ ezie na egwu mbụ sitere na nnọkọ papal na -adịghị ahụ anya nke Pablo zoro aka na ọnyà ọnya dị na akwara nke Yeezus, album ahụ bụ n'ezie akụkọ ozi ọma.
Opekempe maka nke atọ nke atọ nke album ahụ, mgbe Kirk Franklin, Kelly Price, Chance the Rapper, na Kid Cudi sonyere Kanye West na-abụ abụ dị iche iche ruo n'obi enweghị atụ ike gwụrụ nke maestro.
Mazi West ebigoro na TriBeCa, na-abụ abụ gbasara anuse na-acha ọcha na-ewepụta usoro kachasị mma maka paparazzi.
Oge ndị ahụ siri ike na-akọwa ndụ Pablo; ọ dị nwute na, anya dị n'agbata ha nwere ike ịdị oke oghere ịnagide.
Pablo bụ ọba egwu kachasị egwu nke West kemgbe Ndebanye aha mbubreyo, yana mmemme etiti na-emebi ọsọ ndekọ, ụda, na ebumnuche dị ka micro-discography rapaara na shuffle.
Mgbe ọ nọ n'ọnọdụ kachasị njọ-ya bụ, mgbe ọ nọ na umengwụ ya-West na-etinye onwe ya ka ọ bụrụ nke mbụ na-ede abụ, dị ka mgbe ọ na-akụda iberibe ikpeazụ nke "Oge 30," ma ọ bụ mgbe ọ na-eti Taylor Taylor na Ray J aka. na punchlines na -enweghị isi.
Pablo, n'aka nke ọzọ, bụ ihe ncheta maka imekọ ihe ọnụ na itinye aka na ya kacha mma; ọ mara mma n'ezie mgbe West nyere ndị mgbapụta ahụ ohere, ọnụ ahịa, onye nrụpụta, nrọ-izu, izu ma ọ bụ, n'ikpeazụ, Post Malone. N'ihi nke a, Kanye karịrị Kanye, na -enwe ọganiihu na -ekwekọghị ekwekọ.
7. '808s & Obi mgbawa' (2008)
Ọ ga-esi ike ịchọta onye ga-arụ ụka na 808s & Heartbreak bụ ọba kachasị mma nke Kanye. Ònye kacha metụta ndụ ya? Ikekwe.
Onye gbanwere usoro ọrụ ya? N'ezie. Ma olee nke kacha mma? Nke ahụ bụ ikpe siri ike ịme. Agbanyeghị, ọ nwere ike bụrụ nke ziri ezi.
Eziokwu ahụ bụ na nke a bụ nkwupụta tesis lekwasịrị anya nke ọba na-efunahụ na mkparịta ụka nke ma Drake ọ tara 808s. ụda na ezi uche ịmalite oge ọhụrụ na egwuregwu hip-hop.
Ajụjụ bụ ihe Kanye na-eme ebe a, na-agụ egwu pop na-ama jijiji, nke nwere obi nkoropụ karịa egwu elektrọnik. Kanye emeriela anyị maka ọba atọ.
Ọ bụ hip-onye ọ bụla, onye omenkà hop nke yiri ka ọ na-edekọ echiche ọ bụla gafere n'uche ya, anyị na-asọpụrụkwa ya maka ya. Nke ka mkpa, o mere ka ọ nweta ọkwa dị elu nke ihe ịga nke ọma n'oge ọ bụla.
N'agbanyeghị nsogbu niile, ọ bụ nnukwu kpakpando anyị site na ngụsị akwụkwọ.
Ozi ya sitere n'elu bụ 808s. Ozi o ziri bụ na ọ dịghị nke ọ bụla n’ime ya bara uru.
Anyị niile maara akụkọ dị n'azụ album a: ọ bụ ndekọ ọnwụ nke Kanye, nke bụ n'ezie egwu nkewa, na-eso ọnwụ na-atụghị anya ya nke ụmụ nwanyị abụọ ya kacha mkpa.
8. 'Ndebanye aha mbubreyo' (2005)
A na -ahọpụta ngụsị akwụkwọ na njedebe nke ihe nkiri Kanye site na ndị na -akwado ndebanye aha.
Ndebanye aha mbubreyo bụ ọtụtụ ndị a na -ewere dịka ndị kacha daa ogbenye na solo nke ndị kwenyere na ngụsị akwụkwọ bụ oke-Kanye.
Akụkụ kacha mma gbasara ịlaghachi ndebanye aha n'oge gara aga - ọba nke merela agadi nke na -anaghị eme onwe ya oge ọ bụla enwere ike icheta (hey, Graduation, ya na Daft Punk na Chris Martin na amaokwu Weezy ya jọgburu onwe ya) - a na -echetara ya album niile. onyinye, ndị a na -eleghara anya mgbe ụfọdụ.
9. 'The College Dropout' (2004)
The College Dropout bụ ọmarịcha ndekọ. Kanye West egosighi onwe ya dị ka onye na-ese ihe nke nwere ikike ịghọ nnukwu onye ama ama.
Ọ bụ ihe omume mmiri mmiri na hip-hop, na-enye ohere maka ụzọ ọhụrụ ọhụrụ maka ihe ndị na-ese ihe na-egwu egwu.
Na The Blueprint, ọ ga-ama gbanwere ụda hip-hop site n'ịgbakọ akụkọ egwu mkpụrụ obi na ọchịchọ mmapụta ugbu a; ugbu a, ọ bụ oge na-edegharị iwu nke lyrical umi, na-eru crossroads nke n'okporo ámá na klaasị, backpackers na ballers, n'okpuruala na pop charts.
Ọtụtụ n'ime ndị na-amasị ya na-elekwasị anya na akụkụ nke abụọ, ma nke mbụ-ihe okike-dịkwa mkpa. N'ịlaghachi azụ, ọ na -esiri ike ịmata ka album mbụ ya si bụrụ mgbanwe.
N'ihi ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ nke The College Dropout meghere maka ndị na -ese ihe ka ha jupụta, ọpụrụiche ha na -esiri ike ịghọta site na mgbagwoju anya nke akụkọ ntolite.
Agbanyeghị, ọ ka bụ ọba mbụ na-awụ akpata oyi n'ahụ, yana ụdị ọba dị iche iche, yana otu n'ime ọba ndị kachasị emetụtara emepụtara.
The College Dropout nwere ike ọ gaghị ekwupụta nke ọma ihe mere Kanye onye ọ bụ, mana ọ bụ ihe na-atọ ọchị, enweghị ntụpọ, na n'ezie mmadụ. Otú ọ dị, o nyere ya ohere ime otú ahụ.
O yighị ka Yeezus ga -abụ album Kanye West kacha nwee ihe ịga nke ọma; n'ezie, ọ dị ka emebere ya ịwepụ ọtụtụ ndị na-akwado ya, ụfọdụ n'ime ha na-enwekarị mmasị na hip-hop ọdịnala J. Cole.
(E wepụtara Sinner n'otu izu ahụ ka Yeezus.) Kemgbe mmalite Kanye dị ka onye na-ese ihe na 2004, rap apụtala nke ọma.
N'oge ahụ, ọ dịghị onye na-ese hip-hop a ma ama nke ga-ewepụta ọba egwu banyere agha ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji ịbanye na ụlọ ọrụ egwu wee mee ka ọ bụrụ isi ihe nkiri nke akụkọ ahụ.
Akụkọ onye ọ bụla na -adịkarị kwa ụbọchị, yabụ Kanye na -eme ụzọ dị iche. Ebe ọ malitere ọrụ ya na -achọsi ike ịnabata ya, ọ dị ugbu a ka ọ na -achọ ịkpasu ndị egwu iwe.
Ọ dịghị onye nwere ọkwa ihe ịga nke ọma ga -atụle ịtọhapụ ndekọ dị ka esemokwu na onye iro dịka Yeezus.
11. 'Lee ocheeze (2011)
O kweghị ka a tụrụ anya ya. Ọ ga-eme nke ọma. Ọ bụ ọba Kanye West nwere JAY-Z. Ndị a bụ akụkọ ụgha gbara gburugburu Watch the Throne, ọba na-emekọ ihe ọnụ n'etiti titan ejima nke Mt. Rushmore nke rap ọgbara ọhụrụ.
Kanye, megharịrị site na njedebe nke akụkọ nlọghachi na-enweghị mgbagha, dịka ha na-ekwu ugbu a, gbalitere.
O jisiri ike nye ndị na-akwado ya kpọmkwem ihe ha chọrọ, karịsịa ndị mmegide 808, ma na-eju afọ nke ya iji nweta. kpoo hip-hop, pop-shit, egwu ruo ebe ọhụrụ. Kedu ụzọ kacha mma ị ga -esi mee ya ugboro abụọ?
12. 'Ngụsị akwụkwọ' (2007)
Ntọhapụ nke ngụsị akwụkwọ bụ ụbọchị Kanye nọ na -eche ndụ ya niile: ọ bụ ụbọchị ọ ghọrọ onye ama ama.
Otú ọ dị, ọ bụghị n'apata mmeri; ọ bụ mmalite nke oge ọhụrụ maka Kanye, nke ọ ga -enwu gbaa na ọkwa ọhụrụ.
Soro osimiri n'akụkụ m
Eziokwu gbasara ihe ịtụnanya asaa nke ụwa
Agwaetiti Greek kacha mma ileta
Anụ kacha dị ize ndụ n'ụwa
13. 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' (2010)
Mgbe Kanye West mere Ngụsị akwụkwọ, ọ dị ya ka anyị na-ahụ onye na-ese ihe na njedebe nke ọrụ ya.
Egwu ya etoola nke ukwuu. ụda ya na -akawanye mma, ọhụụ ya abụrụla nke doro anya na (dịtụ) nkenke, na ịma mma ya abụrụla nke a na-emegharị emegharị na nke dị nro.
Ebumnobi ya bụ imepụta ọrụ nka na-enweghị mgbagha nke ga-ekpuchikwa mmejọ niile ọ chọpụtara ma mekwaa mkpa ya dị na ya na mkpa dị mkpa maka ọdịbendị. O nwekwara ihe ịga nke ọma.
My Fantasy mara mma gbara ọchịchịrị na -egosipụta akụkọ ya gbagọrọ agbagọ, na -ahazi ma na -agwa onye ọ bụla na -akatọ ya na ndị iro ya okwu.
“Ike,” abụ mmeri mbụ na -enweghị mmeri nke album ahụ, na -eme ka o doo anya na nke a bụ nka nke a ga -emerịrị, nkà nke anyị ga -asọpụrụ ma nwee ekele maka ya.
Ọ na -emikpu n'ime mmetụta nke ịbụ onye a gbahapụrụ agbahapụ na nkewapụ na America na "ọmarịcha" na "furu efu n'ụwa" (na mpụga ya) na -atụgharị uche n'ihu, na obere nkọwa, na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na -achụpụ ya, tupu ịlaghachi azụ n'onwe ya. ; na ndụ ya.
Egwu dị ka “Runaway” na “Blame Game” na -azọ ahịrị dị larịị n'etiti anụ ezi na nke anụcha, nke na -ekwu eziokwu na nke jọgburu onwe ya, na -eme ka Kanye nwee obi ọjọọ ka ọ na -akọwapụta ịhụnanya ya maka Rose.
Ezigbo echiche gbara ọchịchịrị gbagọrọ agbagọ m bụ slopi masterpiece nke dị mkpa na -adọrọ mmasị ma na -etinye aka karịa ihe ọ bụla Kanye wepụtara na mbụ. Ma ọ setịpụrụ ụda maka akụkọ ndị ọzọ.
Anyị na-atụ anya na ị chọtara akụkọ a na ọba rap kachasị ukwuu nke oge niile ka ọ bụrụ ihe ọmụma. Otú ọ dị, ṅaa ntị na nke ọ bụla n'ime ha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na nke a nyere aka, biko mee nke ọma ịkọrọ ndị enyi na ndị ị hụrụ n'anya.
Tags:album kacha mma hip hop nke oge niile bụ isi mmalite, album rap kacha mma nke afọ 2010, ọba egwu kacha mma nke oge niile 2020, ọba egwu kacha mma nke oge niile 2021, album rap kacha mma metacritic oge niile, ọba kacha mma rap nke oge niile reddit, Best rap albums nke oge ọ bụla mpịakọta nkume, gangsta rap kacha mma rap nke oge niile
Free Ebook Download Sites that are Legally Free iji nweta eBooks Site
Florida State Parks & Otu esi echekwa ego na nleta gị
Ozi 30th ụbọchị ọmụmụ Ozi: 65zọ 30 iji kpochie XNUMX na ọchị